Qiimaynta Mashaariicaha Biyo-xidheenada Waawayn Oo Lasoo af-meeray Iyo Arimaha Kontarabanka Oo Laga wada hadlay - Cakaara News
Qiimaynta Mashaariicaha Biyo-xidheenada Waawayn Oo Lasoo af-meeray Iyo Arimaha Kontarabanka Oo Laga wada hadlay
Jigjiga( Cakaaranews ) Talaado, 26ka April 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka soo afmeeray shirkii qiimaynta mashaariicaha biyo-xidheenada waa wayn ee kala ah: baka, goomaar, wiji-waaji iyo maraacaato isagoo kubooriyay in mudo 10 cisho ah lagu dhamaystiro waxa dhiman.
Hadaba shirkadaha iyo engineerada gacanta kuhaya mashaariicahan ayaa dhankooda balanqaaday inay kaga soo bixi doonaan mudada loo cayimay dhamaystirka waajibaadka shaqooyinka uyaala.
Dhanka kalana, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo uu weheliyo wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka DDSI mudane Khadar Cabdi Ismaaciil ayaa gobolada iyo degmooyinka deegaanka kalahadlay arimaha kontarabanka sharci darada ah ee deegaanka soo gala. In kasta oo kontarabanka sharci darada ah aad loo yareeyay 5tii sano ee u danbaysay marka loo eego sanadihii hore. Wuxuuna madaxwaynuhu xusay in mas’uuliyiinta gobolada iyo degmooyinka deegaanku ay wada-shaqayn layeeshaan hay’adaha kuhawlan kahortaga kontarabanka sharci darada ah ee waxyeelaynaya nolosha iyo ganacsiga xorta ah ee kajira guud ahaan dalka.
Sidoo kale, wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka mudane Khadar Cabdi Ismaaciil ayaa kawarbixiyay isbadalka waxkaqabad ee uu xafiisku kakeenay dhinaca ladagaalanka kontarabanka sharci darada ah isagoo wada shaqayn toos ahna laleh jibriyada. Wuxuuna wasiirku kula dar-daarmay gobolada iyo degmooyinka inay kasoo dhalaalaan shaqooyinka kaga aadan ladagaalanka kontarabanka.
Ugudanbayna, gobolada iyo degmooyinka deegaanka ayaa balanqaad balaadhan kasameeyay arintaasi.